musha / Applications / Induction Heating / Induction Kuchenesa Kuchengeta
Category: Induction Heating Tags: kupisa chisimbiso, kukwirira kwakawanda kwekudziya, yakakwirira frequency kuiswa chisimbiso, induction heat heating, induction kusimbisa kupisa, induction chisimbiso maitiro, kusimbisa induction kupisa
Induction Inopisa Kuchengetedza neHigh Frequency Induction Heating Equipment
Induction Kutya inopa nzira dzakanakisisa dzekuisa chisimbiso chealuminium zvigadzirwa pamitsuko yezvokudya. The Induction Kuchenesa Kuchengeta kuvhara maitiro kunotsigira kudzivirirwa kunodzivirira, kuchengeteka, utsanana uye kuchengetedzwa kwemiti. Induction Kupisa kwemafirimu e-aluminium inowedzera kutonhora kwechigadzirwa chekuisa chisimbiso chakashandiswa kune rumwe rutivi rwechifukidzo ichibatana nejagi. Iyi kupisa inosanganiswa nekumanikidzwa kunoshandiswa kuvharo ye 0.5 kusvika ku1.5s. Izvi zvinoshandiswa kune zvisikwa zvose zvezvikwata uye kune zvakasiyana-siyana zvezvinhu, kusanganisira: girasi, makadhibhodhi, uye plastics (PE, PP, PVC ...).
Muzviitiko zvose hapana hukama pakati pe inductor uye chivharo. Mukuwedzera kune izvi zvakakosha, kune zvikonzero zvakasiyana siyana nei ino itsva nzira iri kuramba ichishandiswa:
■ Kupisa kunowanikwa muchivharo chairo pachake
pedyo kusvika kuiswa chisimbiso kumusoro sezvinobvira. The
Izvo zvinogadziriswa uye zvinetso
kunobatanidza nekupisa kwekudzivirira
kuiswa mucherechedzo misoro kunodziviswa.
■ Iyo inokonzerwa nekupisa kushandiswa nzira inogona kushandiswa kuti ive yeridhesi,
zvikwereti, zvigadziko kana zvimwe zvimiro
■ Shanduro inowanzobuda generator inoitwa
achishandisa masimba ehurumende uye haana
zvikamu zvinotarisirwa kupfeka panguva yekupisa kupisa kwekuita.
Isu tinopa huwandu hwemhando dze Induction Heating Sealing zvirongwa:
■ Nhanho imwechete mukupisa kupisa kuiswa chisimbiso.
■ Kuenderera mberi kwekupisa kwekudzivirira kuvhara chisimbiso chisati chagadzirwa.
■ Kutsika kwekudzivirira kutengesa kusina chisimbiso chisati chagadziriswa.